July 2016 - Page 2 of 21 - Puntland Mirror Believable Media Website
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirka warfaafinta dowlada federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in bilowga bisha August shir looga hadlayo doorashooyinka dalka ka dhacaya 2016-ka lagu qabanayo magaalada Muqdisho. Maareeye oo la hadlay wakaalada wararka […]
Ankara-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhaleeceeyay hoggaamiyaasha Reer Galbeedka in ay ku fashilmeen in ay midnimo u muujiyaan Turkiga markii uu dhacay isku-daygii afgembiga fashilmay, isagoo sheegay dalalka ka walwalsan […]
July 29, 2016 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shir u dhaxeeya qayb kamid ah murashixiinta madaxtinimda Soomaaliya iyo ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa ka dhacay Khamiistii magaalada Muqdsho ee caasimada Soomaaliya. “Waxaan la kulmay qayb kamid […]
Cape Town-(Puntland Mirror) Dukaamo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed ayaa lagu gubay dalka Koonfur Afrika, kuwo kalena waa la boobay. Dhibaatada ayaa ka dhacday magaalada Mbkweni ee gobolka Western Cape. Magaalada ayaa waxaa ka socda mudaaharaadyo […]
July 28, 2016 Puntland Mirror 0
Qahira-(Puntland Mirror) Kooxda ka dagaalanta dalka Suuriya ee al-Nusra, sidoo kale loo yaqaan jabhada al-Nusra ayaa iclaamisay in ay ka go’aday urur weynaha al-Qaacida. Hoggaamiyaha kooxda Abu Maxamed al-Julani ayaa fariintiisii kowaad oo muuqaal ah […]
July 28, 2016 Abdi Omar Bile 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Khamiis ah si rasmiya u furay bandhiga buugaagta ee Garoowe. Dhowr qoraa oo Soomaali ah oo uu kamidyahay suugaan uruuriyaha Soomaaliyeed, Axmed Faarax Idaajaa […]
Garowe-(Puntland Mirror) The Puntland President Abdiweli Mohamed Ali has officially opened Garowe international book fair in the capital, Garowe, running until 30 July. Several Somali authors, including Somali literary scholar, Ahmed Farah Farah Idaajaa was […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan labo askari ayaa ku dhimatay shil gaari oo Arbacadii ka dhacay magaalada Muqdisho. Shilka ayaa ka dhacay degmada Dayniile, waxaana shilkaas ku dhaawacmay guddoomiyaha degmada Dayniile, Axmed Nuur Siyaad. Guddoomiyaha ayaa […]
Juba-(Puntland Mirror) Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Koonfurta Suudaan Riek Machar ayaa ku tilmaamay xil ka qaadis uu ku sameeyay Madaxweyne Salva Kiir “Mid sharci daro ah”. Wareysi khadka taleefoonka uu Arbacadii Machar ku siiyay taleefishinka […]